✨✨ Salagadoola menchicka boola Bibbidi-bobbidi-boo ✨✨ Cinderella လေးကို မှော်အစွမ်းနဲ့ ဝင်းလဲ့တောက်ပသွားအောင် ပြောင်းလဲလိုက်သလိုမျိုး သင့်ရဲ့ အသားအရေကိုလဲ ဖြူစင်ဝင်းပသွားအောင် ပြောင်းလဲပေးမယ့် မှော် Set လေး ရှိတယ်နော် ? အဲ့ဒါကတော့ ✨ New Skiin Foam Cleanser Vitamin C ✨ Garnier Vitamin C Super Essence ✨ Snail Whitening Cream တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အသုံးပြုပေးခြင်းအားဖြင့် တင်းတိတ်၊ မှဲ့ခြောက်၊ အမဲစက်များ၊ ဝက်ခြံကြောင့်ဖြစ်သော အမဲစက်၊ အမာရွတ်များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ အသားအရေ မဲညစ်ခြင်းကို သက်သာလာစေပြီး အသားအရောင် ညီညာဖြူဝင်းလာစေပါတယ်။ မှော် Set လေးနဲ့ သင့်အသားအရေကို အခုပဲ ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ New Skiin Foam Cleanser Vitamin C (150g) တစ်ဘူး - ၉,၅၀၀ ကျပ် Garnier Vitamin C Super Essence (30 ml) - ၁၂,၀၀၀ ကျပ် Snail Whitening Cream (50 g) တစ်ဘူး - ၂၉,၅၀၀ ကျပ်
ချောချောချေတို့ ပြောနေတဲ့ ဂါဂါ ခရုဆိုတာဘာလဲ ? ??? ဂါဂါဆိုတာ Garnier Light Complete White Speed Vitamin C Super Essence ဖြစ်ပြီး ခရုဆိုတာ Snail Wish Whitening Cream ပါ ဂါဂါလေးကို ပုံမှန်လိမ်းပေးရင် တစ်ပတ်အတွင်း အသားအရောင် ညီညာ ဖြူဝင်းလာစေခြင်း၊ နှစ်ပတ်အတွင်း ဝက်ခြံအမာရွတ်များ ပျောက်ကင်းစေခြင်း၊ တစ်လအတွင်း အမဲစက်များ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မှေးမှိန်သွားစေပါတယ်။ ခရုလေးကတော့ Snail Mucus က အရေပြားကို အပြည့်အဝဆုံး အာဟာရဓါတ်နှင့် အစိုဓါတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးခြင်း၊ အသားအရေတင်းရင်းမှုအတွက် အဓိကလိုအပ်သော ကော်လာဂျင်ပြည့်ဝစွာ ထည့်သွင်းပေးထားသောကြောင့် အရေးအကြောင်းများကို သိသာစွာ ပျောက်ကင်းစေ ပြီး အသားအရေကို တင်းရင်းနုပျိုစေခြင်း၊ အသားဓါတ်နှင့် Vitamin များက အရေပြား အသစ်ဖြစ်ပေါ်မှုကို အားပေးပြီး အိုမင်းပျက်စီး နေသောအရေပြားဆဲလ်များကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း အစွမ်းထက် ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ ပါဝင်တာကြောင့်အရေပြား အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး အမည်းကွက်၊ အမည်းစက်များ၊ ဝက်ခြံအမာရွတ်များကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ပေးပါတယ်။ ဂါဂါခရုကြောင့် ပြစ်မျိုးမှည့်မထင် အလှတရားကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီပေါ့ ?‍♀️
ကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့ Vitamin C လေး?? ??? ရိုးရိုး Vitamin C မဟုတ်ဘူး Garnier ရဲ့ SuperEssenceVitaminC ?? နေ့တိုင်းပုံမှန်လိမ်းပေးရင် ✅✅✅ ?တစ်ပတ်အတွင်း မျက်နှာအသားအရေလေး သိသိသာသာညီလာတယ် ? ?ဖြူတာမဟုတ်ဘူး အသားလေးဝင်းလာတာ ?? ?တစ်လအတွင်း အမဲစက်၊ အမဲကွက်တွေ ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေ 30% ထိသက်သာလာတယ် ?အရေးအကြောင်းတွေ နည်းသွားတယ် ??‍♂️ ?ဈေးလဲမကြီးဘူး 12000 ကျပ်တည်းပဲ ? မှာမယ်ဆို Cb နော် ? ☎☎09-963683981 #GarnierEssence
Vitamin C က ဘာ‌တွေကောင်းတာလဲ . . . ?Vitamin C က သင့်အ‌ရေပြားဆဲလ် အသစ်ထွက်ရှိခြင်းကို အားပေးပြီး ပျက်စီးနေသော ဆဲလ်များပြုပြင်မှုကို မြန်ဆန်စေပါတယ်. ဓါတ်တိုး ကာကွယ်ပေးခြင်းအားဖြင့် အသားအရေကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မှ ဖျက်စီး ခြင်းကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်. ဒါကြောင့် အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်း ရင့်ရော်ခြင်း တွေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်. ?ဒါ့အပြင် Vitamin C ရဲ့ နူးညံ့သော အက်ဆစ်အစွမ်းဖြင့် ကိုလာဂျင် ထုတ်လုပ်မှုကို တွန်းအားပေးသောကြောင့် အရေပြားတင်းရင်း လာစေခြင်း၊ အမာရွတ်များတွင် အသားတက်မြန်ခြင်းတို့ ဖြစ်လာစေပါတယ်. ?အရေပြားမှ မယ်လနင်ဓါတ်ထုတ်လုပ်မှုကို တားဆီးပေးသောကြောင့် အသားအရေဖြူ၀င်းစေပြီး တင်းတိမ် မှဲ့ခြောက်များကို သက်သာ ပျောက်ကင်းစေတာဖြစ်ပါတယ်. Vitamin C ရဲ့ ‌ကောင်းကျိုး‌တွေ အားလုံးခံစားရရှိဖို့ Garnier Vitamin C Super Essence ကိုလိမ်းကြရအောင်နော် Garnier Vitamin C Super Essence 30 ml တစ်ဘူး ၁၂၀၀၀ ကျပ်. Focus Beauty Agent များထံမှာ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ. #VitaminCSuperEssence